Qadar Oo Ku Dhawaaqday Inay Ka Baxayso Ururka Saliidda Dhoofiya OPEC – somalilandtoday.com
Qadar Oo Ku Dhawaaqday Inay Ka Baxayso Ururka Saliidda Dhoofiya OPEC
(SLT-Doha)-Qatar ayaa maanta sheegtay inay ka baxeyso ururka dalalka saliidda dhoofiya ee OPEC laga billaabi bisha Janaayo ee sanadda 2019, si ay diiradda u saarto dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee la qafiifiyey (LNG).
Isaga oo maanta weriyayaasha kula hadlayey magaalada Doha, ayaa wasiirka tamarta Qatar, Saad Sherida al-Kaabi waxa uu sheegay in dalkiisa oo ah kan dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiiciga ah ee LNG uu qorsheynayo inuu kordhiyo dhoofintiisa.
Qatar ayaa sanadkii soo saarta 77 milyan oo tan oo gaas dabiici ah, hase yeeshee waxa uu al-Kaabi sheegay inay gaarsiin doonaan 110 milyan oo tan.
Qatar ayaa sidoo kale dooneysa inay kordhiso wax soo saarkeeda saliida ceeriin oo hadda ah 4.8 oo barmiil maalinkii, ayna gaarsiiso 6.5 milyan oo barmiil, sida uu sheegay wasiirka.
Qatar ayaa xiisad diblomaasiyeed waxa ay kala dhaxeysaa dalka Sacuudiga oo ah kan ugu awoodda badan dalalka OPEC, hase yeeshee al-Kaabi ayaa sheegay in go’aanka Qatar ay kaga baxeyso ururka uusan xiriir la lahayn arrimo siyaasadeed.
Ururka OPEC oo xaruntiisu tahay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaan weli ka jawaabin go’aanka Qatar.